Maayarka Burco Oo Lagu Eedeeyay In Uu Leexsaday Raashin Ay Lahaayeen Qoysas Danyar ah – HormoodNews
12/20/2017 9:39 pm by Khadar Muuse Views: 6
Burco (HN): Dadweynaha baro-kaceyaasha ah ee degan xaafadda Aadan Saleebaan ee magaaladda Burco ayaa cabasho ka muujiyay raashin caawimo ah oo ay hay’ad siisay oo ay sheegeen in maayarka magaaladaasi u diiday.
Dadweynaha barakaceyaasha danyarta ah ee cabashadda dhigay oo maanta isu soo bax dhigay ayaa ku eedeeyay maayarka magaaladda Burco Maxamed Muraad in uu xanibay rashin ay hay’ad ka mid ah kuwa khayriga ah ugu tallo gashay dadkaasi.
Waxaanay xukuumadda Somaliland ugu baaqeen in ay wax ka qabato dhibaatadan uu kula kacay maayarka Burco, isla markaana ay si dedg deg ah uga soo gaadho cunno-qabatayta uu ku sameeyay maayar Muraadka Burco.
“Maayarka Burco, raashinkii la siinayay dadka masaakiinta ah wuu ka xayiray. Saddex maalmood ayaanay halkaa yimaadeen, waana la kala eryay waxaana lanagu yidhi waxba la bixin maayo” sidaas waxa yidhi oday ka mid ahaa dadkii isu soo baxa dhigay.
Sidoo kale waxaa iyana halkaasi cabashadoodda iyo waxay la xidhiidha ka sheegtay hooyo ka mid ahayd dadkii mudaharaadka dhigayay. Waxaanay tidhi “Maayarka Burco in nalaga qabto ayaanu doonaynaa, cunno qabatayn ayuu na saaray, hay’adihii noo imanayay wuu noo diiday”.
Waxa kaloo dadkan danyarta ah ee cabanayay ay xukuumadda Muuse Biixi gaar ahaana wasaaradda arrimaha gudaha ugu baaqeen in ay wax ka qabato maayarka Burco oo ay sheegeen in aanay garanaynin sababta uu raashinkaasi caawimadda ah uga xidhay.
“Waxaanu xukuumadda ka codsanaynaa in xayiraada uu saaray maayarka Burco saaray na looga qaado raashinka caawimadda ah ee lana siiyay” sidaasina waxa tidhi gabadh ka mid ahayd dadkii cabashadda dhigayay.
Geesta kale caawimadan ay dadweynaha danyarta ah sheegeen in maayarka Burco ka xanibay ayaa isugu jirta raashin, busteyaal iyo waxyaabo kale oo ay ka mid yihiin maacuunka wax lagu cunno, taasoo loogu tallo galay in la siiyo dadkaasi.
Dadweynaha ku nool xaafadda Aadan Saleebaan ee magaaladda Burco ayaa ka soo qaxay degaamadda baadiyaha ah ee magaaladda Burco, kuwaasoo xoolahoodii ay kaga baxeen abaarihii dalka soo maray.